Ny Holland America Line dia manomboka ny vanim-potoana miaraka amin'ny Cruise mankany Karaiba
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Ny Holland America Line dia manomboka ny vanim-potoana miaraka amin'ny Cruise mankany Karaiba
Ny Rotterdam vaovao an'ny Holland America Line dia miainga anio 5 Novambra amin'ny 5 ora hariva EST avy ao Fort Lauderdale, Florida, amin'ny diany voalohany any Karaiba — sambo mandehandeha dimy andro mitsidika an'i Bimini, Bahamas, ary mandany roa andro ao amin'ny Half Moon Cay. Tonga tao Port Everglades ny sambo tamin’ny 3 Novambra taorian’ny diany voalohany namakivaky ny Atlantika izay niainga avy tany Amsterdam, Holandy, ny 20 Oktobra.
Rotterdam dia nanamarika ny sambo faharoa niverina tany Florida cruise sy Karaiba ho an'ny Holland America Line hatramin'ny nanombohan'ny fiatoana manerana ny indostria 20 volana lasa izay. Amin'ny volana Novambra, hiaraka amin'ny Port Everglades ilay sambo miaraka amin'ny sambo rahavavy Pinnacle Class Nieuw Statendam sy Eurodam, izay manomboka ny vanim-potoana Karaiba ihany koa. Nieuw Amsterdam dia nanomboka nandehandeha tany Karaiba avy any Fort Lauderdale tamin'ny 23 Oktobra.
Nankalaza ny fiaingan'i Karaiba tao Rotterdam tamin'ny firavoravoana hitsena ireo vahiny tao anaty sambo ny zotram-piaramanidina, ary teo an-tanana i Antorcha hitsena ireo mpandeha an-tsambo.
Taorian'ny fitsangantsanganana tamin'ny 5 Novambra, dia handeha sambo any Karaiba hatramin'ny Aprily i Rotterdam, miaraka amin'ny fiaingana rehetra avy any Fort Lauderdale. Manodidina ny enina ka hatramin'ny 11 andro ny dia ary mamakivaky ny faritra amin'ny lalana atsimo, atsinanana, andrefana ary tropikaly. Ireo vahiny mitady fialan-tsasatra lava kokoa dia afaka manomboka amin'ny Diarin'ny Mpamory — dia zotra mihemotra izay manolotra fikarohana lalina mandrakotra faritra mihoatra ny iray.
Ny fitsangantsanganana Karaiba rehetra dia misy antso ao amin'ny Half Moon Cay, nomena ny seranan-tsambo laharana voalohany any Karaiba avy amin'ireo vahiny ao amin'ny tsipika. Nivoatra ho kianja filalaovana ho an'ny mpandeha an-tongotra ity toeram-pialan-tsasatra mahafinaritra ity ary manasongadina ny tora-pasika fotsy tsara indrindra, villa misy rihana roa ary cabanas manokana, toeram-pisakafoanana toa an'i Lobster Shack, valan-drano ho an'ny ankizy ary fitsangatsanganana isan-karazany ho an'ireo tia zavaboary, mpanao dia lavitra. ary mpikaroka.